यी ४ राशिका लागि फलिफाप छ चैत महिना, तपाईको पर्यो की ?
२०७७ साल चैत महिनाको राशिफल
मेष राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिनामा अल्लि बढी दौडधुप पर्नेछ । र पनि केही उपलब्धि एवं व्यवसायिक लाभ हातपार्न सकिने छ ।
वृष राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना अल्लि संघर्षकर देखिएको छ । रपनि महिनाको शुरु र तेस्रो हप्तामा उपलब्धि एवं सफलता मिल्ने छ ।
मिथुन राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिनामा आशा अपेक्षा अल्लि बढी हुने तर उपलब्धि कम हुनेछ । आएको आश्वासनको पूरा भरोसा नगरेको सुखकर हुनेछ ।
कर्कट राशि हुनेहरूको लागि यो महिना उन्नति एवं उपलब्धिमूलक रहने छ । विशेष कामकार्यमा केहीहद्सम्म सफलता मिल्ने छ । केही महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्ति हुनेछ । पेशागत प्रतिष्ठा बढ्ने छ ।
सिंह राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना केही सुधारात्मक छ । विशेष चाहना गरेको काममा अड्चन आएपनि दैनिकी कार्यमा सफलता मिल्ने छ । दैनिक व्यवसायिक कर्ममा उन्नति हुनेछ ।
कन्या राशिको लागि यो महिना धेरै अनुकूल देखिएको छैन । संघर्ष एवं स्वास्थ्यमा ज्वरो एवं पित्तविकार जन्य स्वास्थ्यमा प्रतिकूलताको भय देखिएको छ । निकै ख्याल गर्नुहोला ।
तुला राशि हुनेहरूको लागि पनि यो महिना त्यति सहज देखिएको छैन । बढी महत्त्व दिएको काममा रोकावट आउनसक्ने भएकोले कार्ययोजना गराउँदा विचार पुर्याउनु उचित हुनेछ ।
बृश्चिक राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना तपाईको पक्षमा छ । अधुरा कामकार्यहरुलाई पूर्णता दिन सकिने छ । तथापि व्यक्तित्त्व एवं कर्मक्षेत्रको प्रतिष्ठा बचाउन हौंस्याहट्लाई संयम गर्न जरुरी देखिएको छ ।
धन राशि हुनेहरूको लागि यो महिना केही सुधार भएको छ । रपनि विशेष मानिएका कामहरुमा अड्चन आउने छ । सामान्य कामकार्यहरुमा भने केही सफलता मिल्ने छ ।
मकर राशिको लागि यो महिना बढी चाहना गरेको काममा अवरोध तर खासै विचार नगरेको काम बनेर उपलब्धि मिल्ने छ । विद्यार्थीहरुले जुक्तिको प्रयोग गरेकोखण्डमा अध्ययनमा सहज हुनेछ।
कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो महिना मिश्रित रहने छ । शारीरिक जोशजाँगर बढेर आउने, कामकार्यमा मन लाग्ने र केही काममा सफलता हात पार्नसकिने छ । शारीरिक परिश्रमबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु सफल हुनेछन् ।
मीन राशि हुनेहरूको लागि यो महिना उन्नतिकर रहने छ । सामान्यतया केही पक्षमा तनाब महसूस भएपनि अधिकांश पक्षमा अनुकूल एवं सफलताप्रद देखिएको छ ।
यो पनि- यी हुन् ५ प्रकारका पैसा फलाउने बोटः घरमा यी बिरुवा राखे छाउँछ सम्पन्नता !
सामान्यतयाः मानिसहरू कसैलाई पेच पर्नेगरी भन्नुपर्यो भने भन्छन् कि पैसा रूखहरूमा फल्दैन् ? तर रूखमा पैसा नफलेपनि वास्तुशास्त्रका अनुसार त्यस्ता रूख र बोटहरू बताइएको छ, जसले घरमा पैसा बढाउन सहयोग गर्छन ।
श्वेटार्क दुधको बोट हो र यसलाई राम्रो भाग्यको सूचक पनि मानिन्छ । कुनै सेतो पदार्थ निस्कने बिरुवा घरमा राख्नु हुँदैन । श्वेटार्क भनिने यो बोटलाई गणेशको प्रतीक मानिन्छ । यो उत्तम छ कि तपाईं यसलाई घरको सट्टा बार्दली वा बरान्डामा राख्नहोस् । यस कारणले गर्दा, घरमा सधैंका लागि शान्ति र खुशी रहन्छ ।